UMpengesi uthi iChippa izinzile eMandela Bay
USIVIWE ‘Chippa’ Mpengesi ongusihlalo weChippa United, uthi akukho ukungaboni ngaso linye phakathi kwakhe noMasipala waseNelson Mandela Bay Isithombe: BACKPAGEPIX
MTHOKOZISI MNCUSENI | May 22, 2020
UZISHAYA isifuba ngokuthi iqembu lakhe liyinyama koMasipala abehlukene usihlalo weChippa United, uSiviwe “Chippa” Mpengesi, obephendula ngamahemuhemu akhomba ukuthi yena noMasipala waseNelson Mandela Bay, abasaboni ngaso linye ekuxhasaneni kwabo.
“Akusensuku zatshwala iChippa United, iphinde ilule isivumelwano enaso noMasipala waseNelson Mandela Bay.”
Lawa ngamazwi asakukloloda ashiwo nguMpengesi muva nje ngesikhathi ekhuluma ne-Independent Media. Obekwenza uMpengesi abuzwe ngalokhu, wukuthi iNelson Mandela Bay ingenye yabaxhasi abaqavile beChilli Boys.
“Asikho isidingo sokuxhamazela ngokusayina isivumelwano esisha. Alikho elinye iqembu elifunwa umasipala ngaphandle kweChippa United ngakho-ke kungani kufanele sixhamazele ngenxa yamahlebezi?
“Angisiboni mina isidingo sokutatazela ngoba engikwaziyo sizosayina isivumelwano esisha maduze,” kusho lesi sikhulu esidume ngokuxosha abaqeqeshi.
UMpengesi uphendula kanje-nje, yingoba ubexinwe ngemibuzo ethinta ukungaboni ngaso linye kwakhe nalo masipala obese kwenze kwaze kwavela nokuthi iBloemfontein Celtic iyona ebingase ithathe indawo yeChippa eNelson Mandela Bay Stadium, ePort Elizabeth.
“Akufanele ngabe ngiyiphendula kalula kanje le ndaba ngoba lo masipala esikhuluma ngawo ufaka imali enkulu kwiChippa United. Kholwa yilokhu engikushoyo, ubudlelwano phakathi kwethu neNelson Mandela Bay busesimeni esigculisayo.
“Okwenze le nkundla yasetshenziswa njengendawo yokugcina abadediswa emphakathini ngenxa yeCovid-19, wukuthi (inkundla) ibingenzi lutho njengoba kungekho midlalo,” kusho lesi sikhulu sakuchoma.
"Bonke abasezikhundleni bayazi ukuthi uma kuziwa ngakunobhutshuzwayo, alikho iqembu elikhulu kuneChippa United e-Eastern Cape. Bonke abantu bafuna thina eduze kwabo."
Ngaphambi kokufika eNelson Mandela Bay, iChippa ibizinze eCape Town kwaze kwaba ngu-2014.
“Kuningi esibhekene nakho okwamanje okumqoka kakhulu, ngakho kwabanye kungabukeka sengathi ezinye izinto sizizibile kanti cha. Sinesivumelwano seminyaka engu-20 neNelson Mandela Bay.
“Njalo ngemuva kweminyaka emithathu siyahlangana sibuyekeze izinto ezithile siphinde sivumelane. Sisanda kuqeda eminye yale minyaka emithathu esihlangana ngayo, ngakho sizohlangana maduze sibhunge ngezivumelwano ezintsha uma zizoba khona.
"Nase-East London yinto efanayo. Nabo uma sikhuluma nabo bakhombisa izimpawu zokuqonda ukuthi e-Eastern Cape alikho iqembu elikhulu kuneChippa United,” kusho yena.
Ngesikhathi kumiswa imidlalo ngenxa yeCovid-19, iChippa ibisempini yokugwema izembe kanti konke lokhu akloloda ngakho uMpengesi kungashabalala uma engadliwa yizembe.